Himalaya Dainik » महिनावारीका बेला प्याड किन्दा ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा
महिनावारीका बेला प्याड किन्दा ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा
महिनावारीका बेला महिलालाई घर बाहिर जानु पर्दा निकै सम स्या हुने गर्दछ । त्यसैले कतिपय महिला यस्तो बेला घर बाहिर निस्कन नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहाना राख्दछन् । तर कार्यालयको काम, अध्ययन वा अरु कामका लागी बाध्यात्मक अवस्थामा घरबाहिर निस्कनु पर्ने हुन्छ ।
यस्तोमा घरबहिर निस्दा, कतै लामो समय बस्दा वा हिँडडुल गर्दा प्याड परिवर्तन गर्न संभव हुँदैन । त्यसैले महिना वारी भएको बेला घर बाहिर रहँदा यी सावधानी अपनाउनु पर्छ ।
१. गुणस्तरीतामा ध्यान– कतिपय महिला केहि थोरै रकम बचाउन सस्तो र गुणस्तरहिन प्याड किन्ने गर्दछन् । तर यस्ता प्याडले दाग लाग्ने सम्भावना मात्र होइन संक्र मणको जोखिम पनि बढाउँछ । त्यसैले प्याड किन्दा राम्रो र गुणस्तर नै किन्नु पर्दछ ।
२. छाला सुहाउँदो प्याड– हरेक मानिसको छाला फरक फरक हुने भएकाले महिलाले प्याड किन्दा आफ्नो छाला अनुकुल भएको ब्राण्डको मात्र किन्नु पर्दछ । आफुलाई अनुकुल ब्राण्ड पहिचान गरेर नियमित सोहि ब्राण्ड मात्र प्रयोग गर्नुहोस् । यसले छाला चिला उने सम स्या रहदैन ।
३. ठुलो आकारको प्याड किन्ने– बजारमा हरेक आकारको प्याड पाइन्छ । तर, सकेसम्म महिनावारीका बेला ठुलो अर्थात एक्स्ट्रा लार्ज आकारको प्याड नै प्रयोग गर्नु पर्दछ । लामो आकारको प्याडले बढि सोस्नुका साथै बाहिर दाग लाग्न दिदैन ।
४. नियमित प्याड फेर्ने– कतिपय महिला प्याड जोगाउने नाममा एउटै प्याडले दिन कटाउँछन् । तर यो गल्ति नगर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईमा इन्फेक्सन ख तरा बढ्न जान्छ । महिनावारीको पहिलो र दोस्रो दिन अनिवार्य रुपमा हरेक ३ घन्टामा प्याड फेर्न जरुरी हुन्छ ।
५. सफा हुन आवश्यक- महिनावारीका बेला नियमित नुहाउने, सफा सुग्घर हुन आवश्यक छ । महिनावारीको समयमा हुने सानो लाप रबाहिले पनि रोग तथा संक्र मणको खतरा बढाउँछ । तसर्थ आफ्नो गो प्य अं गलाई राम्ररी सफा गर्न र नुहाउन आवश्यक हुन्छ ।